Maxaa laga filan karaa shirweynaha dhuxusha ee Muqdisho ka furmay? - BBC News Somali
Waxaa shirka qabanqaabadiisa leh hay'adaha Qaramada Midoobay ee UNDP iyo FAO , halka ay hormuud ka tahay dowladda Soomaaliya, waxaana ka qeybgalaya xeeldheerayaal xagga deegaanka ah.
Shiinuhu ma xakamayn karaa Kuuriyada Woqooyi?!
Ra'isulwasaare ku xigeenka Soomaaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo furitaankii shirka ka hadlay ayaa yiri "Waxaan u baahanahay in aan u wajahno si dhab ah arrimaha dhuxusha Soomaaliya, dalabka iyo daabulka waa in wax laga qabtaa labadaba, si ay taas u suurtogasho waxaan u baahanahay iskaashi in la fuliyo qaraaradii Golaha Amaanka , lana hubiyo in laga hortago qasaaraha deegaanka , dhaqaalaha iyo dadkaba gaaraya".
Image caption Ka qeybgalayaasha shirka ayaa waxaa ka mid ah xeeldheerayaal xagga deegaan ah oo meelo kale duwan ka yimid
Image caption Dekedda Kismaayo